पुदिना सेवनका फाइदाहरु - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार पुदिना सेवनका फाइदाहरु
पुदिना सेवनका फाइदाहरु
बर्षायाम सुरु भएसँगै हाम्रो गाउँघरतिर पुदिना मौलाएको देखिन्छ । हाम्रो गाँउघर वरपर सहज रुपमा पाइने पुदिना स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक रहेको छ ।
पुदिना अत्यन्त धेरै औषधीय गुण भएको वैज्ञानिकहरूले समेत प्रमाणित गरेका छन् । नियमित रुपमा पुदिनाको सेवन गर्दा शरीरभित्र भएको कतिपय ब्याक्टेरिया र ढुसीको वृद्धिदर रोक्दछ । यस्तै दम एलर्जीजस्ता रोगमा पुदिना ज्यादै उपयोगी मानिन्छ । यसमा पेरिलिन, अल्कोहल नामक एउटा फाइटो न्यूट्रिन्टस हुन्छ ।
जसले कोलोन, छाला र फोक्सोको क्यान्सर रोक्दछ । दिनहुँ खानाको साथमा आधा चम्चा पुदिनाको रस वा ४–५ वटा ताजा पुदिनाको पात वा केही मात्रामा यसको अचार खाएमा अपच हुँदैन । पेट फुल्ने वा अजीर्ण हुने समस्यामा पुदिनाको २ चम्चा रसमा अलिकति विरेनुन राखी मनतातो पानीसँग खाँदा पेट फुलेको ठीक हुन्छ ।
पुदिनाको बासनाले नाक, घाँटी,स्वास नली तथा फोक्सोको बाटोलाई खोल्ने तथा स्वासप्रस्वासलाई सहज बनाउन मद्धत गर्दछ ।
पुदिनाले स्वासप्रश्वास प्रक्रियाको बाटोलाई सफा गर्ने हुनाले यी मार्गको जलनबाट हुने खोकीलाई पनि निको गर्छ । त्यसैले दमका विरामीहरुलाई पुदिनाको सेवन गराउने चलन छ । कुनै अंगमा घाउ भएमा वा काटेको ठाउँमा रगत बग्न नरोकिएमा घाउ सफा गरी पुदिनाको पात राम्ररी पखाल्ने र त्यसको रस निकाली लगाउँदा रगत थामिन्छ र छिटो निको पार्न समेत मद्दत गर्दछ ।
प्रायः सबैलाई थाहा भएको कुरा हो पुदिनाको एक फाइदा मुखको स्वास्थ्य पनि हो । पुदिनामा भएको किटाणुनासक विशेषताले मुख भित्र हुने किटाणुहरु मारी जिब्रो तथा दाँतका भागहरु समेत सफा बनाउँछ ।
त्यस्तै स्वासलाई समेत सफा र ताजगी राख्न मद्धत गर्छ । पुदिनाको प्रयोगले बान्ता र टाउको दुखाईको समस्या समाधान गर्न सक्छ । यसको कडा तथा स्वच्छ बास्नाले बान्ता हुने तथा टाउको दुखाईको समस्या समाधान गर्छ ।
लामो यात्रामा निस्कँदा हुने वाकवाकी, केवल पुदिनाको पात, तेल तथा पुदिना मिसाइएका बस्तु सुघ्नाले ठिक हुन्छ । यति मात्रै होइन पुदिनाको तेल, बाम (भिक्स) निधार, नाकमा लगाउनाले टाउको दुखाई ठिक हुन्छ ।
यति मात्र नभई सौन्दर्यका लागि पनि पुदिना उपयोगी छ । छालाको चाउरीपना हटाएर चम्किलो बनाउन, कपाल झर्नबाट रोक्न, चायाबाट जोगिन पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
Previous articleयी जिल्लामा ठूलो वर्षा, अझै पानी पर्ने सम्भावना
Next articleमेलम्ची बजारमा उद्धारको गुहार : स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्, ‘५० औं जना बेपत्ता’
वडा अध्यक्ष र सचिवलाई दलियो कालोमोसो
आजको मौसम कस्तो छ?
चितवनमा निर्माणाधीन नालीमा च्यापिएर खेर गयो गैंडाको ज्यान
देशभर चिसो बढ्यो, आज यी क्षेत्रमा हल्का हिमपात हुने
अवैध रुपमा सगरमाथा पुगे जी न्यूजका प्रतिनिधि
काठमाडौं उपत्यकामा सीडीओहरूको बैठक बस्दै : स्मार्ट लकडाउनबारे निर्णय हुदै